Change myanmar font in Sony Ericsson Xperia X8 or X10 - Myanmar in Singapore
Change myanmar font in Sony Ericsson Xperia X8 or X10
Posted by tun tun lin on December 10, 2010 at 5:40pm
တော်တော်လေးကိုခေါင်းကိုက်လိုက်ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လဲ ကျွန်တော်အရင်က
ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေပဲပေါ့ အခုဆိုရင် Market Store ကနေပြီးတော့လည်း
Application တွေဂီမ်းတွေကို ပိုက်ဆံမပေးပဲဒေါင်းလို့လုပ်လို့ရ ပါပြီအကြောင်းသတင်းကောင်းပြောလိုက်ပါတယ်
ဒီပို့စ်မှာတော့ မြန်မာစာတွေကို Xperia X8, X10 မှာမြင်ရအောင် လို့ပါ..
တစ်နေ့ကကျွန်တော်ဝယ်လာတာ ကြိုးစားပြီးရှာထားပါတယ်... ကူညီပေးတဲ့ ကိုကျော်စွာငြိမ်းနဲ့
ရည်ရွယ်မြင့်မြတ် တို့ကို ဒီပိုစ်လေးနဲ့အတူကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းခင်ဗျာ..
ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ဖုန်းလေးကို Root လုပ်ပေးရပါမယ်..Root လုပ်တယ်ဆိုတာက သင့်ဖုန်းမှာ သင်လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအောင် ပါမစ်ရှင်တောင်းသလိုပါပဲ.. Root လုပ်ပြီးရင်တော့ သင်ပြင်ချင်တာကိုပြင် လို့ရပါပြီ.. Root လုပ်တာလည်းအရမ်းလွယ်ပါတယ်..ဒီနေရာမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး Root လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် zip ဖြည်လိုက်ပါခင်ဗျာ..
ပြီးရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ settings-&gt; applications -&gt; development USB DEBUGGING MODE ON နောက်ပြီးရင် settings-&gt; sd card, usb mass storage &amp; phone storage UNMOUNT SD CARD မှာအမှန်လေးပေါ်အောင်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ နောက်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို ကွန်ပြုတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ (make sure debugging is on &amp; memory card is unmounted) စောစောကဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ Superoneclick ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Root ဆိုတာကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ ..အချိန်၁၀မီးနစ်လောက်ယူပါလိမ့်မယ် သူ့ဘာသာသူအလုပ်နေမှာပါ
ပြီးရင်တော့သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ် Root Done Box လေးကို အဲဒါဆိုရင် OK နှိပ်ပြီး ဖုန်းကိုကွန်ပြုတာနဲ့ဖြုတ်လိုက်ပြီး Restare လုပ်လိုက်ပါ ခုဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ..
ခုလုပ်ရမှာက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို software လေးတစ်ခုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလော့ချပေးပါ ပြီးရင်သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို ထည့်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ..
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ မြန်မာစာဖောင့်ဒေါင်းလော့လုပ်ပါမယ် ဒီမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျ. ပြီးရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ SD Card မှာFolder တစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင်ကွန်ပြုတာနဲလုပ်တာပြီးသွားပါပြီ..
အခုကွန်ပြုတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ကို အဆက်သွယ်ဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ဖုန်းမှာ "ROOT EXPLORER" ဆိုတဲ့
ပြီးရင်အောက်ပါအတိုင်းသွားလိုက်ပါ / system/ font/ DroidSansFallback.ttf ".
ပြီးရင DroidSansFallback.ttf အဲဒါလေးကို ကော်ပိကူးလိုက်ပါ နောက် သင့်Memorry Card ကိုပြန်သွားပြီး
Paste လုပ်ထားလိုက်ပါ.. နောက် ပြီးရင် စောစောက မြန်မာစာဖောင့် folder ကိုသွားပါ စောစောက DroidSansFallback.ttf (This is myanmar font just same name) မြန်မာစာဖိုင်လေးကိုကော်ပိလုပ်လိုက်ပါ
နောက် / system ကိုပြန်သွားပါ Fonts ကိုရွေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Paste လုပ်လိုက်ပါ အဲမှာ ဘောက်စ်လေးတစ်ခုတက်လာပါမယ်.. ထပ်ပြီးထဲမှာလားနာမည်တူနေတယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ YES သာလုပ်လိုက်ပါ နောက်ပြီးရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Restart လုပ်လိုက်ပါ ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာမြန်မာစာကိုကောင်းကောင်းမြင်ရပါပြီခင်ဗျာ...
တစ်ကယ်လို့ singapore မှာရှိနေတယ် လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် softlovesky@gmail.com ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် 84294708 ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Views: 16367
Comment by Yuko Ishida on October 2, 2012 at 11:59am cant................... Comment by botak on September 14, 2012 at 10:19pm font ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် change လို့မရဘူး။ အဲ့ဂလိုလားဗျ။ ဘယ်အဆင့်တွေ ဘယ်လို လုပ်ပြီးပြီလဲ ဆိုတာ ရှင်းအောင်ပြောမှထင်တယ်ဗျ။ Comment by pyaesonephyo on September 13, 2012 at 2:18am SoneyEricssion Xperia Arc S မှာမြန်မာ fontsကသွင်းလို့ဝူးဖြစ်နေတယ် setting ကိုဘယ်လိုchange ရမှာလဲပြောပေးပါဦး
Comment by botak on September 12, 2012 at 7:56pm >>>>root လုပ်တဲ့ဟာပါခင်ဗျ Comment by Htun Lin on September 11, 2012 at 10:53pm Root လုပ်တဲ့ ဖိုင်လ် ဒေါင်းလို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျ ကူညီပေးပါ
Comment by ဇော်ဇော် on August 5, 2012 at 3:55am winRaR ကိုဘယ်လိုzip ဖြေရမလဲ ခင်မျာ ကျွန်တော်က အခုမှ ဖုန်းဝယ်ပီးတာပါ ဒါကြောင့် ခုမှထည့်ဖြစ်တာ အရင်က ဒေါင်းထားတယ် ဒါပေမယ် zip မဖြည်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ပြန်လည်ရှင်းပြပးစေချင်ပါတယ် အခုလို့ ကုညီတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ် မေးပို့ပေးမှဆိုရင် zawzaw1351@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါတယ် အခုဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းက Xperia ပါ firware version က 2.1-update 1 kernal version ကတော့2.6.29 ပါ
ကူညီပေးပါ မြန်မာဖောင့ မရှိတော့သုံးရတာ အဆင်မပြေလိုပါ ကျေးကျေး Comment by botak on July 2, 2012 at 10:18pm root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပြီးသွားရင် xperia X8 ကို android version 2.3.7 မြှင့်ပြီး သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်
ီDownload these files
-using PC create folder [xRecovery] and unzip xRecovery0.1.rar
- put the3files into the xRecovery folder you've created
- copy the xRecovery folder to root of SD Card
-UnMount Xperia X8 from PC
- Launch [Root Explorer]- scroll down to /sdcard [click to access]- scroll down to xRecovery folder [click to access]
- Select each of the3files (one by one) [click & hold] [copy]
- [click to access] [bin] and [click] [Mount R/W] (R/W as in Read/Write)- press [paste] button
စပြီး install မလုပ်ခင် back up လုပ်ချင်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
SD card ထဲမှာ အနည်းဆုံး 650MB of free space ဖြစ်နေရပါမယ်
- shutdown your X8 and wait5seconds and then [reboot] your phone.
- when you see the words [Sony Ericsson] on the phone screen, start pressing the back button on your phone multiple times and you will enter the xRecovery Menu.- select [backup and restore] [backup] from the menu
- After you have completed the backup using xRecovery, it will return to the menu screen.- Now choose [reboot] - your X8 phone should restart
- when you see the words [Sony Ericsson] on the phone screen, start pressing the back button on your phone multiple times and you will enter the xRecovery Menu.- [select] [factory reset (full wipe)]- scroll down and hit [install custom zip]- select [GingerXperiaV10.zip] from your SD card & hit [yes]- xRecovery will start to install the 2.3.7 ROM on your phone.- when it is done, xRecovey will go back to the startup menu- [click] [reboot]
Comment by botak on June 10, 2012 at 12:19am နည်းနည်းပွားကြည့်မယ်
SD ကဒ်ထဲကို copy ဖုန်းမှာ install လုပ်
ဒါပဲပေါ့ :):) Comment by Thar Khin Oo on June 9, 2012 at 9:29pm Thanks ,may i want to know how to install the myanmar font at samaung Galaxy Nexus. Comment by botak on June 5, 2012 at 9:35pm ရပင့်တွေအပေါ်ရောက်နေတယ်တစ်ချို့ xperia 8 ကျတော့လည်း အဆင်ပြေသားပဲဘာကွာလည်းမပြောတက် :)